တောရက်စ် | 21/07/2021 23:55 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အချို့သောအစားအစာများသည်နွေရာသီနှင့်အီးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် အန္တရာယ်ကင်းကြီးကြပ်အလေးအနက်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နွေရာသီ၏မြင့်မားသောအပူချိန်များသည်ဘက်တီးရီးယားများ၊ မှိုများနှင့်အစားအစာကိုညစ်ညမ်းစေသောရောဂါပိုးမွှားများပြန့်ပွားစေခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါက၎င်းတို့သည်အစားအစာအဆိပ်သင့်ခြင်းကဲ့သို့သောကြီးလေးသောပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သံသယလူသိများကြောင်းတစ်ခုခု စည်းကမ်းအရ၎င်းသည်အရက်ဆိုင်များတွင်အစာစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ။ သို့သော်လေ့လာမှုများနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအရနွေရာသီတွင်အစာအဆိပ်သင့်မှုအများစုသည်အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဘယ်ဟာကအိမ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုမခံရဘူးဆိုတာပြတယ်။
သူတို့ဟာနွေရာသီမှာပိုပြီးအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူတို့ဟာဆောင်းရာသီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာများစွာသော စားသုံးသောအခြေအနေမကောင်းသောကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပေမယ့်ဆောင်းရာသီ၏အအေးကြောင့်မတားဆီး။ ထို့ကြောင့်၊ အကောင်းဆုံးသောအရာမှာအစားအစာကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အမြင့်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရန်အဖြစ် နွေရာသီ၏အန္တရာယ်များအချို့သောအစားအစာများသည်နွေရာသီတွင်ပိုမိုစားသုံးခြင်းကြောင့် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီအသားကင်။ စားပြီးအပူ၌အချိန်များစွာကုန်လွန်စွာစားသုံးနိုင်သောလတ်ဆတ်သောအသားများ၊ ညံ့ဖျင်းသောအိမ်လုပ် mayonnaise ဖြင့်သုပ်များသည်သာဓကအချို့သာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နွေရာသီမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာစာရင်းကရှည်တယ်။ ၄ င်းတို့သည်အန္တရာယ်အများဆုံးသယ်ဆောင်သောအစားအစာ ၄ မျိုးဖြစ်သည်.
ဟမ်ဘာဂါကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသောအသားသည်များသောအားဖြင့်မသိသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဆက်ဆံသောအခါ, တူညီသောတိရိစ္ဆာန်ကနေ cutlet သို့မဟုတ်အမဲသားကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းထက်ဟမ်ဘာဂါအတွက်အန္တရာယ်ပိုမိုကြီးမားသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, minced အသားများသည် nook များနှင့် crannies များစွာရှိပြီးဘက်တီးရီးယားများပွားများနိုင်သည် နှင့်အပူတစ်ခုလုံးကိုအညီအမျှရောက်ရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။
အဲဒါကိုမေ့မထားဘဲ နွေရာသီအသားကင်၏ကြယ်သည်ဟမ်ဘာဂါဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသားများကိုချက်ပြုတ်ရန်အချိန်ကာလမရောက်မှီအအေးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အအေးကွင်းဆက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်အသားများကိုအကာအကွယ်မပေးဘဲမထားခြင်း။
ကြက်ဥသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းအလွန်ကျန်းမာသောအစားအစာဖြစ်သည်။ Salmonella သည်ဥအတွင်းပွားများစေသောဘက်တီးရီးယားတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်သူတို့အလွန်လေးနက်စေသောရောဂါ။ ဒါကိုရှောင်ရှားရန်သင်အိမ်အပြင်ဘက်သို့ယူရန်ဥနှင့်အတူအစားအစာတစ်လုံးကိုပြင်ဆင်မည်ဆိုလျှင်သမင်ကဲ့သို့သောအစားထိုးများအသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ Mayonnaise ပြင်ဆင်မှုအတွက်သာမကစပိန် omelettes နှင့်အခြားကြက်ဥအခြေခံသောဝက်အူချောင်းများအတွက်ပါ။
အလွန်ကောင်းသော၊ အလွန်ကျန်းမာပြီးအသားကင်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သော်လည်းနွေရာသီတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အာလူးများကိုလှော်ရန်လူမီနီယံသတ္တုပါးကိုအသုံးပြုသည် လူစုခွဲသောအခါစိုထိုင်းဆအဖြစ်ပြောင်းလဲသည့်အပူအရင်းအမြစ်။ အကယ်၍ သင်အာလူးကင်ပြုလုပ်နေပြီး၎င်းတို့အားလုံးမစားပါကသူတို့ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိုလှောင်ပါသို့မဟုတ်အခြားအာလူးကဲ့သို့သောအစာအဖြစ်ပြောင်းပါ။
ဤကြွယ်ဝသောကျန်းမာသောအသားများသည်အထူးသဖြင့်နွေရာသီနှင့် အကယ်၍ လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပြုလုပ်ထားလျှင်နူးညံ့ပြီးအန္တရာယ်အရှိဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြက်သားအသားများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီဆေးကြောသင့်သည်။ လက်နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများသည်အသားကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အလွန်သန့်ရှင်းသင့်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကြက်သားအသားကိုအမြဲတမ်းအလွန်ကောင်းစွာမစားသုံးမီချက်ပြုတ်ရမည်.
နွေရာသီတွင်အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအလွန်အမင်းသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲအစားအစာအကြောင်းဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ သင်သည်အခြားလူများနှင့်အတူသွားနေလျှင် သင်အလွယ်တကူအစားအစာနှင့်အတူရှုံးနိမ့်နိုင်တယ်, အခြားဟင်းလျာများကိုရွေးချယ်ပါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည်။ အန memory တရာယ်မရှိသောအစားအစာမှတ်ဉာဏ်ကသင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နွေရာသီကိုပျက်စီးစေသည်ကိုမရှောင်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » နွေရာသီ၏အများဆုံးအန္တရာယ်အရှိဆုံးအစားအစာများ